अलबिदा डा. हरि सापकोटा !! सिङ्गो कर्णाली प्रदेशले तपाइलाई सम्झिने छ। – नेपाली सूर्य
अलबिदा डा. हरि सापकोटा !! सिङ्गो कर्णाली प्रदेशले तपाइलाई सम्झिने छ।
October 2, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on अलबिदा डा. हरि सापकोटा !! सिङ्गो कर्णाली प्रदेशले तपाइलाई सम्झिने छ।
नेपालमा पहिलो पटक को’रोनाका कारण एक चिकित्सकको नि’धन भएको छ । को’रोना सं’क्रमित भई उपचार गराइरहेका भेरी अस्पताल नेपालगन्जका वरिष्ठ चिकित्सकको नि’धन भएको हो । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ्गले को’रोना सं’क्रमित भेरी अस्पताल नेपालगन्जका वरिष्ठ चिकित्सकको नि’धन भएको पुष्टि गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस पोष्ट गर्दै यसको पुष्टि गरेकाछन् । उनका अनुसार को’रोना पोजेटिभ भेरी अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक भेरीको आइसोलेसनमा उपचाररत रहँदा असोज १५ गते बिहीबार दिउँसो नि’धन भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन, एघारौ तहमा कार्यरत डा हरि सापकोटाको को’रोनाबाट नि’धन भएको हो । बाकेको खजुरा निबासी ५९ बर्षिय डा सापकोटाको १५ दिन देखि भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा उपचार भई रहेको थियो । भेरी अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिरहेको बेला दिउँसो पौने तीन बजेतिर उनको नि’धन भएको हो । योसँगै एकैदिन बिहीबार को’रोनाबाट बाँकेमा नि’धन हुनेको संख्या तीन पुगेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले श्रद्धाञ्जली दिँदा प्रयोग गरिएको तस्बिर हामीले प्रयोग गरेका हौं ।
रौतहटमा शंकास्पद अवस्थामा १४ वर्षीया बालिका उखु बारीमा मृ’त फेला
January 21, 2022 January 21, 2022 Nepali Surya
सुजिता मृत्यु प्रकरण : परिवारले आत्महत्या दुरुत्साहनको जाहेरी दियो
पत्रकार बस्यालको निधन